Ny fifaninanana hazakazaka Curragh - IntoKildare
Ny filan'ny Irlandey amin'ny hazakaza-tsoavaly dia angano ary ny fanandramana azy amin'ny Curragh dia tsy hay hadinoina. Ireo matihanina amin'ny hazakaza-tsoavaly dia olona liana amin'ny fitiavana ilay soavaly malaso. Ao anatin'ny ràn'izy ireo ny fitsangantsanganana. Tongava mankafy andro iray amin'ny hazakazaka ary mankafiza fanatanjahantena kilasy eran'izao tontolo izao amin'ny toerana mahafinaritra eo amin'ny lemaka Curragh, izay nanjary hazakazaka soavaly sy soavaly nandritra ny taonjato maro. Nisokatra tamin'ny taona 2019 ny sehatra vaovao Curragh ary ivon-toerana maneran-tany misy fiononana sy traikefa ho an'ny mpanjifa mitovy amin'ny hotely kilasy ambony noho ny toerana fanaovana fanatanjahantena. Ny hazakaza-tsoavaly no be indrindra amin'ny fanatanjahan-tena sy ny sakaizam-pianakaviana, ny zaza latsaky ny 18 taona dia afaka. Tsidiho ny tranokala Curragh Racecourse anio ary amandriho ny andro manaraka amin'ny hazakazaka. www.nofa.ie
Curragh Pacecourse sy Toeram-piofanana
Ny Curragh Racecourse dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny fiainana andrefana tamin'ny velarantany 2,000 hektara amin'ny Lemak'i Curragh nandritra ny taonjato maro. Ny Curragh Plains dia fonenan'ny mpitaingin-tsoavaly 1,000 amin'ny fiofanana amin'ny trano fitobiana hita manodidina ny toerana fiofanana telo samihafa. Ny Curragh dia fonenan'ny hazakazaka fisaka 5 lehibe indrindra any Irlandy isan-taona fantatra amin'ny anarana hoe Classics. Ny Derby Irlandey, izay nihazakazaka voalohany tamin'ny 1866, dia zava-dehibe amin'ny vanim-potoanan'ny hazakazaka Curragh ary atao amin'ny Sabotsy farany amin'ny volana Jona isan-taona. Fotoana lehibe ara-tsosialy sy ara-panatanjahantena, ny Derby Irlandy dia andro iray tsy tokony hohadinoina. Ny Curragh dia manomboka ny fivoriana hatramin'ny martsa ka hatramin'ny oktobra isan-taona. Raha mila fanazavana fanampiny, zahao ny tranokala Curragh.
Ny Curragh Racecourse dia faly nanambara fa tsy ho ela izy ireo dia handray famandrihana an-tserasera ho any ambadiky ny seho fitsangatsanganana ny tranobe sy ny vala. Hitsidika ireo toerana izay tsy voafetra ho an'ny besinimaro ianao amin'ny andro firazanana, toy ny efitrano fanovana jockeys, ny efitrano fandanjana ary ny lavarangana ambony VIP izay tazana ny lemaka Curragh. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho: Curragh Racecourse - Aorian'ireo fitsangatsanganana an-tsehatra
Tantara sy lova
Ny hazakaza-tsoavaly sy ny soavaly mitaingina dia tapany afovoan-tanety feno lemaka amin'ny lemaka Curragh nandritra ny taonjato maro ary ny niandohan'ny anaran'ireo toerana dia manondro fa ny Curragh dia toerana voafantina ho an'ny hazakaza-tsoavaly niverina an'arivony taona maro. Ny lemak'i Curragh dia manana ny sakan'ny tantara sy ny halaliny mitovy amin'ny toerana rehetra any Irlandy. Maninona raha mandeha ary hahita ity tantara ity ho anao? Na archelogy na mahaliana anao ny miaramila, ny fambolena, ny tantara ara-politika sy ny fanatanjahantena, ny Curragh Plains dia manana tantara mahatalanjona holazaina ary ny dia iray namakivaky ireo tantara ireo dia manazava ny fomba fijanonan'ny fiainana sy ny fiasa eo amin'ny Curragh dia nijanona ho velona hatrany hatramin'ny ela indrindra teo amin'ny tantara. mandraka androany.
Adventure sy hetsika, Kildare mpitaingin-tsoavaly, Newbridge
Newbridge, County Kildare, R56 RR67, Irlandy.